Robert Forster, Magacaabista Abaalmarinta Akademiga ee "Jackie Brown", wuxuu ku dhintey 78 ans - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Robert Forster, Magacaabista Abaalmarinta Akadeemiyada ee "Jackie Brown", wuxuu ku dhintaa 78 ans - dadku
ka Lindsey Bahr | Saxaafadda Associated Press
LOS ANGELES - Robert Forster, jilaa caan ah oo caan ah kaasoo ku raaxeystay ku soo laabashada xirfadiisa iyo magacaabista Oscar ee ka hoos ciyaara bond bond Max cher ee "Jackie Brown," ayaa dhintay jimcihii. Garyaqaanka caanka ah Kathie Berlin ayaa sheegay in Forster uu u dhintay kansarka maskaxda ka dib xanuun yar.
Wuxuu ku sugnaa guriga Los Angeles, oo ay hareereeyeen xubno ka tirsan qoyska, oo ay ku jiraan afartiisa caruur iyo lammaanaha Denise Grayson.
Murugada ayaa habeenimadii Jimcaha ku soo qortay warbaahinta bulshada
Bryan Cranston waxay twitterka ugu yeedhay "nin qurux badan oo jilaa ah". Labada nin waxay ku wada kulmeen filimka "Alligator" ee 1980 ka dibna waxay iska kaashadeen mar labaad TV-ga "Breaking Bad" iyo filimkiisa gaagaaban "El Camino", kaas oo lagu sii daayay Netflix Jimcihii.
"Waligey ma ilaawi doonin sida naxariis iyo deeqsinimo leh ee Cranston uu ugu qoray wiil hada ka bilaabay Hollywood.
Saaxiibkiis oo ah "Jackie Brown," Samuel L. Jackson, wuxuu soo dhigay twitter-ka in Forster uu "runtii ahaa jilaa / jilaa heer sare ah !!"
Nin asal ahaan ka soo jeeda Rochester, New York, Forster wuxuu macno ahaan u turunturooday inuu ficil sameeyo, markii uu kulleejku dhiganayay, isagoo damacsanaa inuu noqdo qareen, wuxuu raacay arday uu iskudayay inuu kula hadlo hoolka shirarka halkaas oo lagu qabtay "Bye Bye" Birdie ". Wuxuu ku xirnaan lahaa barnaamijkan, saaxiibkaan wuxuu noqon lahaa xaaskiisa oo uu lahaan lahaa seddex gabdhood, taasna waxay siin doontaa dabeecad cusub oo jilaa ah.
Door Fursad ah oo ku jirta Soo-saarkii Broadway ee 1965 "Mrs. Dally wuxuu leeyahay Lover "wuxuu saaray radar ee Darryl Zanuck, oo u saxeexay qandaraas istuudiyaha. Dhawaan wuxuu sameyn doonaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee John Huston ee '' Reflections in a Golden Eye '' ee 1967. Waxaa ka soo muuqday Marlon Brando iyo Elizabeth Taylor.
Forster wuxuu ciyaari lahaa filimka 'Haskell Wexler' ee "Dhexdhexaad Cool", oo ah naqshad Chicago ah, iyo taxanaha telefishanka dambiyada "Banyon". Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha sare ee uu mar dambe dhihi doono waa bilowga "Dhibaatada Da'da 27".
Wuxuu si joogto ah ugu shaqeeyay sannadihii 1970 iyo 1980 ee ku dhawaad ​​aflaanta B ee la ilaawi karo - ugu dambeynti wuxuu ka muuqday in kabadan filimada 100, kuwaas oo badankood aan laga maarmin.
"Waxaan hayaa afar caruur ah, waxaan qabtay shaqo kasta oo macquul ah," ayuu ku yiri wareysi uu siiyay Chicago Tribune sanadkii la soo dhaafay. “Mar alla markii aan u maleynayay inaan u dulqaadan karo heerka hoose, dib ayey ugu dhici doontaa mar labaad, ka dibna markale. Dhamaadka dhamaadka, ma aanan lahayn wakiil, maareeye ma lihi, qareen ma jirin, waxba. Waxaan qaatay wax kasta oo ku dhex dhacay dillaacyada. "
"Quentin Tarantino filimkiisii ​​1997" Jackie Brown "dib ayuu ugu dhigay khariidada. Tarantino wuxuu abuuray doorka fekerka Max Cherry ee Forster - jilaaga ayaa ku guuleystey inuu ku guuleysto xisaabinta doorka "Reservoir Dogs", laakiin agaasimuhu wuxuu balanqaaday inuusan iloobi doonin.
Wareysi lala yeeshay Fandor sanadkii hore, Forster wuxuu xasuustaa in “Jackie Brown” loo bandhigay isaga, ayuu u sheegay Tarantino. Waxaan hubaa inaysan kuu ogolaan doonin inaad i soo qorto.
Tarantino ayaa ku jawaabay, "Waxaan qoraa qof aan doonayo."
Forster ayaa yidhi: "Taasina waa markii aan ogaaday inaan helayo fursad kale oo xirfadeed. "Wuxuu i siiyay shaqo, sannadihii ugu dambeeyay ee 14-na waxay ahaayeen kuwo cajiib ah."
Waxqabadka hortiisa Pam Grier wuxuu noqday mid ka mid ah sheekooyinka ugu diirran ee soo laabashada Hollywood, iyada oo heshay abaalmarinkeedii ugu horreeyay iyo keliya Oscar. Wuxuu ku dhammaaday guuldaradii dahabiga ahayd ee Robin Williams, oo ku guuleystay "Good Will Hunting" sannadkaas.
Kadib "Jackie Brown", wuxuu u shaqeeyay si joogto ah iyo heer aad uga sareeya "The Slump", aflaanta sida David Lynch ee "Mulholland Drive", "Aniga, aniga iyo Irene", "Faracyada", "Olympus ku dhacay "iyo" Waxa ay hayeen "iyo barnaamijyada TV-yada sida" Jabinta Bad "iyo" Mataanaha Sare ". Wuxuu sheegay inuu jecel yahay inuu isku dayo majaajillo sida aabihii Tim Allen ee "Man Man Standing".
Wuxuu sidoo kale soo muuqan doonaa dabayaaqada sanadkaan taxanaha Apple + oo uu soo saaray Steven Spielberg, oo cinwaan looga dhigay "sheekooyinka la yaabka leh."
Xitaa maalmihiisii ​​mugdiga ahaa Forster wuxuu had iyo jeer u arkaa naftiisa inuu nasiib leeyahay.
Waxaad baranaysaa inaad aqbasho dhammaan shaqooyinka jira oo aad uga faa’iideysato waxa aad haysato. Iyo qof kasta oo da 'kasta oo nolosha ah, haddii ay fahmaan, wuxuu leeyahay dhammeystir aad ufiican kuwa aan istaagi karin inuu qaado sawir aan lacag kaa siinin ama aan u fiicneyn sida ugu dambeeya, ”ayuu yidhi. wuxuu u sheegay IndieWire gudaha 2011. "Awooddu waa wax walba."
Forster waxaa ka badbaaday afartiisa caruur, afar ayee ayee u yihiin iyo Grayson, lammaanahiisa sanadihii 16.